Booska Angry Birds hadda waa rasmi. | Androidsis
Booska Angry Birds hadda waa rasmi.
Zack | | Shimbiraha cadhooday, Ciyaaraha Android, Noticias
Waa lagu xaman jiray, waxay arkeen fiidiyowga aan caadiga ahayn ee ku saabsan iyo hadda Rovio rasmi ah Space Birds Angry ayaa soo muuqan doonta bishaan Maarso.
Qaybtan cusub, oo noqon doonta ciyaar cusub oo aan cusbooneysiin doonin, Shimbirahan soo jiidashada leh ayaa hawada galaya.
Mawduuca ciyaartu waa isku mid sidii had iyo jeer, waxaad shimbiraha ka soo bixineysaa slingshot waana inaad garaacdaa doofaarrada ukunta ka xado. Kaliya Meel bannaan oo shimbiro xanaaq leh waxaan ku dhex jiri doonnaa booska, sidaas darteed Intaas waxaa sii dheer, cuf isjiidadka iyo fiisigiskiisa cusub waa in la tixgeliyaa.
Cuf-isjiidadku wuxuu ciyaarta siin doonaa qallooc. Waxaan heli doonnaa asteroids iyo meereyaasha culeyska cufkooda ay ka dhigayaan shimbirahayaga inay ka leexdaan dhabbilahooda sidoo kalena soo jiitaan, shimbiraha, doofaarrada iyo dhammaan walxaha ka muuqda shaashadda.
Fiidiyowga soo socda, dadka Rovio wuxuu ina tusayaa sida ciyaartu noqon doonto saldhigga caalamiga ee hawada sare. Sidoo kale daqiiqada 3-aad waxaan arki karnaa sida ciyaartu noqon doonto, saameynta culeyska, shimbiraha cusub, iwm.
Booska Angry Birds waxaa laga heli doonaa laga bilaabo Maarso 22 ee loogu talagalay Android, IOS, PC iyo Mac. Nooca Android-ka ah wuxuu ku xirnaan doonaa bar yar oo xayeysiin ah, ama ugu yaraan waa tan ugu amniga badan tan iyo dhammaan cayaaraha kale ee Angry Angry ay yihiin, in kastoo xogtaan aan weli la xaqiijin.
Haddii, sida aniga oo kale, aad leedahay dulqaad yar oo aad rabto inaad waxbadan ka ogaato meelaha shimbiraha xanaaqsan, bogga rasmiga ah ee ciyaarta, fiidiyowyada ayaa laga furi doonaa Maarso 10, 12, 14, 15 iyo 16.
Wax badan ayaa laga sheegay oo ku saabsan nooca booska ee Shimbiraha careysan iyo ragga jooga Rovio waxay umuuqdaan inay qabteen shaqo aad u wanaagsan. Cuf-isjiidadka shakigu shaki la'aan wuxuu siin doonaa taabasho cusub sagaalka iyo xaqiiqdii madax-xanuun badan. Waxaan horey u calaamadeeyay 22nd kalandarka, waxa ugu horeeya ee aan sameeyo maalintaas waa inaan galo Google Play oo soo dejiso: D.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Shimbiraha cadhooday » Booska Angry Birds hadda waa rasmi.
Pixlr-o-matic waa tifaftire sawir lama huraan u ah Android
Ku abuur sawir-gacmeed adiga kuu gaar ah oo leh PhotoWall Live Wallpaper